Yeyiphi eyona B2C CRM yeShishini lakho elincinci? | Martech Zone
I-Webinar: I-COVID-19 kunye neRetail-amaQhinga aSebenzayo okuNyusa ukuThengisa kwakho kwiLifu
Ukudala amava abaThengi kwiiFintech | KwiMfuno yokuThengiswa kweWebhu yeWebhu
Yeyiphi eyona B2C CRM yeShishini lakho elincinci?
NgoMvulo, Meyi 4, 2020 NgoLwesibini, Meyi 5, 2020 UDaniela McVicker
Ubudlelwane babathengi buhambe umgama omde ukusukela oko baqala. Ingqondo ye-B2C (yezoShishino iye kuMthengi) nayo iye yatshintshela kwingqondo engaphaya kwe-UX endaweni yokuhanjiswa ngokupheleleyo kwemveliso yokugqibela. Ukukhetha isoftware efanelekileyo yolawulo lobudlelwane kubathengi kwishishini lakho kunokuba yinkohliso.
Ngokwezifundo, i-87% yamashishini asebenzisa iiCRM ezisekwe kwilifu ngokusebenzayo.
I-18 CRM Statistics ekufuneka uyazi ngo-2020 (nangaphaya kwayo)
Ngobuninzi bezinto onokuzikhetha, kunokuba nzima kwaye kube noxinzelelo ukukhetha efanelekileyo. Makhe sijonge eminye imizekelo ebalulekileyo kunye nendlela onokuthi ukhethe ngayo isixhobo esifanelekileyo kwiimfuno zeshishini lakho elincinci.
Uyikhetha njani iCRM
Ngaphambi kokuba singene kuyo, kubalulekile ukuseta iikhrayitheriya ezithile elityeni. Okokuqala, akukho zixhobo zimbini zeCRM ziyafana - nganye ineseti yayo yokukhetha.
Ukukhetha elungileyo kuninzi kwenziwa ngokuzibonakalisa kwicala lenkampani, ikakhulu malunga nento oyifunayo. Ngelixa ezinye iinkampani zibeka phambili ukuthengisa, ezinye zikhetha ukulandela umkhondo kunye nohlalutyo. I-CRM elungileyo iya kuba nefuthe elihle kwisicwangciso sakho sokuthengisa umxholo, esikwenza ukuba ubone ukuba loluphi uhlobo lomxholo ovelisa ngakumbi izikhokelo. Makhe sijonge eminye imibuzo enokukunceda ufumane i-CRM efanelekileyo kwishishini lakho:
Ubungakanani beshishini lakho
Likhulu kangakanani ishishini lakho?
Ngaba usebenza kumazwe aphesheya okanye ekhaya?
Bangaphi abasebenzi onabo kwaye uyanda?
Yimalini idatha oyicwangcisayo mihla le kwaye iyanda?
Ukusebenza kobugcisa kwishishini lakho
Zeziphi iintlobo zeengcali onazo kwimivuzo yakho?
Ngaba unabahlalutyi beenkcukacha kunye nabathengisi abakhoyo?
Ngaba ikwenza njani inkqubo yokuxhasa abathengi kunye nenkqubo yokuthengisa?
Izinto eziphambili ngokubaluleka kwishishini lakho
Zithini izinto eziphambili ngokubaluleka xa kufikwa kulwaneliseko lwabathengi?
Utyala malini kwintengiso nakwintengiso?
Ulungelelaniswe njani ukuhamba komsebenzi wakho kwaye ngaba kukho naziphi na iingxaki?
I-55% yabanini bamashishini bacela ukusetyenziswa ngokulula kwiCRM zabo ngaphezulu kwayo yonke enye into.
Iitshathi ezili-12 zeCRM ezimangalisayo ongafuni ukuba ziphoswe
Nje ukuba uphendule yonke le mibuzo, uya kuba nomfanekiso ocacileyo kunye nenjongo yoko ukufunayo. Kulula ukungabali ngendlela engeyiyo kwaye ukhethe iCRM engakulungeliyo, kuphela ukubuyela umva kwenye eyahlukileyo kamva. Ngoku ngoku sicace gca ekukhetheni iCRM elungileyo, masijonge kweyona mizekelo ibalulekileyo.
Ukuba ujonga ulawulo olufanelekileyo kunye nokucwangciswa kweCRM, i-Agile CRM ikugubungele. Esi sixhobo siqhayisa ngobuninzi bokuzenzekelayo kunye nolawulo zonxibelelwano onokukhetha kuzo ezinokuhambisa ulwalamano kubathengi.
Yenzelwe ngokukodwa amashishini amancinci engqondweni kwaye ayinazo iinketho ezithile ezinkulu zeshishini onokuzifumana kwiiCRMs. Nangona kunjalo, i-Agile CRM iza nenkxaso epheleleyo yeeplagi kunye namawijethi oko kuthetha ukuba ungayenza ngokwezifiso iimfuno zakho zeshishini ngokugqibeleleyo.
Ndwendwela i-Agile CRM
Ukuba ujonga i-CRM yentengiso yeshishini lakho, sukujonga ngaphezulu kwePipedrive. Le nkonzo yenzelwe ngokukodwa ukuthengisa okuphakathi, oko kuthetha ukuba iza kugcwele ubuninzi bezinto ezithile onokukhetha ukuzithengisa.
Uyilo lobumbeko olucekeceke kunye ne-UI yokudonsa nelahle iqinisekisa ukuba iqela lakho lineqonga elikhawulezayo nelithembekileyo lokusebenza nalo. I-Pipedrive ikwavumela ukudityaniswa kwe-imeyile oko kuthetha ukuba iqela lakho lokuthengisa akufuneki lenze izinto ezininzi ngee-tab ezahlukeneyo kwaye ligxile ekwenzeni umsebenzi wabo.
ICopper (ngokusesikweni iProsperworks) yiCRM ngokudityaniswa ngokupheleleyo kukaGoogle. Oku kuthetha ukuba inkonzo iyahambelana nazo zonke iiapps kunye nezixhobo ezifumaneka kuGoogle, kubandakanya iDrive, iSpredishithi kunye noXwebhu.
Yintoni eyahlula iCopper kwezinye iiCRMs kukuhambelana kweVoIP eza kudityaniswa kwinkonzo.
U-Amari Mellor, uMmeli weNkonzo yaBathengi aBaphezulu we Ukubamba
Oku kuvumela abaphathi bakho bokuthengisa kunye nenkxaso yabathengi ukuba basebenzisane nabatsali kunye nabantu besithathu ngaphandle kokuphuma kwisixhobo ngokwaso. Irekhoda kwaye igcine izingxoxo zezwi kuhlalutyo lwamva kwaye ikuvumela ukuba ugcine kwaye uguqule idatha ebalulekileyo ngqo kwiGoogle uqobo. ICopper yenye yeCRMs ezigcweleyo ngakumbi phaya kwaye ilungile kumashishini amancinci amancinci afuna isisombululo seCRM esisigxina.
Njengeyona CRM ifikelelekayo kwimarike, iHubSpot ihlala ifikelela kwi-hype. Olu lukhetho lwento yokuqala yokuqalisa kunye namashishini amancinci aneebhajethi zokungabikho. Ivumela ulawulo olupheleleyo lwabathengi kunye nohlalutyo lwedatha, kunye nokudityaniswa kweGmail ngaphakathi kweCRM. Eyona nto ilunge kakhulu, iHubSpot ihlengahlengisa amaxabiso ngokweendlela ozikhethayo kunye nephakheji oyikhethayo.
Izinto ezimbalwa ozisebenzisayo, uya kuhlawula kancinci ekupheleni kwenyanga. IHubSpot liqonga elihle lokulandela umkhondo wedatha kunye nolawulo lwabathengi ngaphandle kokhetho oluphambili olukhoyo. Nangona kunjalo, le yinto engezantsi, kuba uninzi lweendlela eziphambili zokulandela umkhondo kunye nohlalutyo azifuneki kumashishini amancinci nasakhulayo.
Ukuba isithintelo kubasebenzisi abali-10 asisiyongxaki kuwe, ke uZoho unokuba yiCRM efanelekileyo kwishishini lakho. I-Zoho yiCRM yasimahla enesiseko sokusebenza kweCRMs eziphambili. Ivumela ulawulo lwabathengi, uhlalutyo kunye nenkxaso kwi-UI yenkonzo.
I-Zoho yenziwe ngobuchule kunye nabathengisi engqondweni kunye neempawu zokukhulisa amandla. Oku kuthetha ukuba iqela lakho lokuthengisa lingenza imeko yokhuphiswano kuqaliso kwaye lisebenzele ukuphucula elinye nelinye. I-Zoho inikezela ngobuchule obuphambili ngakumbi kunye noluhlu olwandisiweyo lomsebenzisi ngentlawulo encinci yenyanga. Nangona kunjalo, uninzi lwamashishini amancinci kunye nokuqala kuya kufumana okuninzi kokungafaniyo kunye nokusebenza kwinguqulelo yasimahla nayo.
Okokugqibela, ukuba ulawulo lwedatha kunye nokulandela umkhondo wabathengi yinto oyifunayo kakhulu, i-Highrise iya kukugubungela oko. Inkonzo yakhiwe ngokugcinwa kwedatha esekwe engqondweni, okuthetha ukuba unxibelelwano lwabathengi lonke lugcinwe ngokukhuselekileyo kwiCRM.
Ukuphakama kusebenza kakhulu ngendlela efanayo nezixhobo zolawulo lweprojekthi kunye neencwadana zamanqaku zakho, kodwa nge-CRM twist. Oku kuthetha ukuba ujongano lucocekile kwaye kulula ukufikelela kulo. Unokulawula uluhlu lwakho lwe-imeyile kwaye uhambise imiyalezo kubathengi bakho nge-Highrise ngaphandle kokusebenzisa iinkonzo zokuthumela imeyile. Ukuba ujonga ulawulo lwedatha kunye nesixhobo sokulandela umkhondo kwishishini lakho, sukujonga ngaphezulu kwePhakamileyo.
I-CRM yakho yeyabaThengi bakho
Cinga ngabathengi bakho kunye nokunxibelelana kwakho xa ukhetha isoftware yeCRM. Zeziphi iingxaki ohlangabezana nazo ngoku kwaye ungathanda ukunciphisa? Lo mbuzo ulula ngamanye amaxesha unokuba linyathelo lonke olifunayo ukutyala imali kwisisombululo seCRM.
I-74% yabasebenzisi beCRM bathe banokufikelela ngakumbi kwiinkcukacha zabathengi emva kokutyala imali kwiCRM.
Isoftware yeCRM yomSebenzi
Akukho sidingo sokwenza ulawulo ngesandla lwabathengi ngezisombululo ezininzi ezizeleyo nezifikelelekayo phaya. Thatha umtsi wokholo kwaye uzame isixhobo esitsha ukubona ukuba kuyahambelana na nokuhamba komsebenzi okhoyo. Unokumangaliswa ziziphumo.
tags: i-agile crmishishini kumthengiIshishinizobheduCRMinboxgoogle suiteUnyukela phezulukwenziwa kanjaniindlela yokukhetha i-crm
Daniela McVicker Monday, May 4, 2020 Tuesday, May 5, 2020
UDaniela McVicker yibhlog kunye nombhali ozimeleyo osebenza ngokusondeleyo kunye namashishini e-B2B kunye ne-B2C abonelela ngokubhalwa kwebhlog, ukukhuphela kunye neenkonzo zokubhala ghost. Okwangoku, unegalelo Ukujonga kwakhona. Xa uDaniela engabhali, uyakuthanda ukuhamba, funda ezothando kunye neentsomi, kwaye uzame iwayini entsha.
I-COVID-19: Abathengi kunye ne #StayAtHome Statistics
I-COVID-19: Ubhubhane waseCorona kunye neMithombo yeendaba yeNtlalo
Fumana isishwankathelo se-imeyile ngamanqaku am amva, iminyhadala kunye neepodcast ezisiwe kwibhokisi yakho engenayo!
I-Digest yemihla ngemihla I-Digest yeveki
© Copyright 2021 DK New Media, Onke Amalungelo Agciniwe